Farmaajo Farxad ka Filo” Warbixin | HOYGA WARARKA CAALAMKA
Muqdisho- Tabiye.com– Waxaa si weyn loo hadal hayaa doorashadii ka qabsoontay dalka taas oo ay ku loollamayeen 21 musharrax. Intuba waxay ku hardamayeen kursiga madaxweynenimo ee dalka. Saadaal iyo qiimeyn ay sameeyeen khubaro caalami ah ayaa beenowday. halka filashadii shacabka Soomaaliyeed ay rumowday. Lama filaan ayey noqotay natiijadii ka soo baxday doorashada. Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo loo yaqaanno Farmaajo waa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya afarta sano ee soo socota. Doorasho aanan leysla gaarin wareegga saddexaad ayuu kaga adkaaday dhammaan murashaxiintii la tartamayey oo qaarkood tanaasulay.
Taariikhda Madaxweyne Farmaajo.
Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo ah madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho 5-tii Maarso, sanadkii 1962-kii. Waxa lagu naaneysaa Farmaajo, asal ahaanna waa erey Af-talyaani ah (Formaggio) halka afka ingiriisiga ahna uu noqonayo Cheese oo macnihiisu yahay Burcad. Waa siyaasi ahna diblomaasi gaaray heerka barfasoornimo. Intii u dhaxeysay 1985 – 1989 wuxu ahaa danjiraha Soomaaliya ee waddanka Mareykanka. Wuxu shahaadada M.A iyo B.A ka qaatay jaamacadda Buffalo ee ku taalla New York sanadihii 1997-kii iyo 2000. Wuxu hayey xilka raysul wasaaraha Dowladdii ku meel gaarka aheyd ee uu madaxweynaha ka ahaa Shariif Sheekh Axmed intii u dhaxeysay 1-dii Nov 2010 – 19-kii June 2011. Waana guddoomiyaha xisbiga Tayo.
Taageeradii Madaxweyne Farmaajo.
Habeenkii la dooray iyo wixii ka dambeeyay waxaa bilowday dibad-baxyo aad loogu taageerayo Madaxeynaha la doortay, Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa noqday Madaxweynihii ugu taageerada badnaa Hogaamiyaashii Dalka soo maray kadib bur burkii Dowladdii dhexe ee Soomaaliya, balse dad badan ayaa isweydiinaya sababta uu Mudane Farmaajo ku helay taageerada shacabka Soomaaliyeed uuna u yahay hogaamiye guuleystay, taasi ayaa ah inuu aamisan yahay Soomaali mid ah oo dhinac walba raali isaga ah sida uu ku sheegay khudbad uu xilli hore jeediyay
Guusha Iyo Dhaarintiisii.
Siddeedii feebaraayo ee sanadkan 2017 waxay maalin la filayey, la feejignaa oo umuurta dhaceysey ay ku faafsaneyd gayiga Soomaaliyeed iyo dunida qeyb kamid ah. Waa markii ay rumowday rajadii shacabka Soomaaliyeed oo muddo u hanqal taagayey natiijada kasoo baxeysa doorashada madaxtinimo ee dalka oo dhowr goor baaqatay taas oo ay ku loollamayeen 21 musharrax. Tirada cod bixinta ee wareegga koowaad iyo kan labaadba waxay yididdiilo galiyeen shacabka Soomaaliyeed oo xaqiiqsaday in xubnaha metelaya ee baarlamanku (labada aqal) ay ka dhabeeyeen rabitaankooda.
Inkastoo wareegga labaad iyo kii saddexaadba intaan leysla gaarin ay go’aanno geesinnimo leh qaateen raysul wasaarihii iyo madaxweynihii waqtigoodu dhammaaday oo kala ahaa Cumar Cabdirashiid Cali iyo Xasan Sheekh Maxamuud, haddana dadka siyaaadda indho-indheeya waxay aad uga hadleen arrinta madaxweynaha. Haddii Xasan Sheekh Maxamuud uu ku adkeysan lahaa la tartamidda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wareegga labaad helay 184 cod halka uu isaguna heystay 97 cod, waxa muuqatay in uu wajahayey guul-darro qaraar iyo in looga adkaado codadkii ugu badnaa ee abid looga guuleysto musharrax u tartamaya xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya. Sidaas daraaddeed wuxu goostay in uusan galin hardanka wareegga kala baxa ah ee saddexaad, kaas oo soo af-jaray shaki ahaa in uu mar kale soo laabto.
La Taliye iyo Raysul-Wasaare
Sida aan xusuusanno intii uu hayey xilka ra’isul-wasaarenimo ee xukumaddii tayo, wuxu kasbaday kalsoonida shacabka Soomaaliyeed kaddib waxqabad muuqda oo ay la yimaadeen isaga iyo saaxiibbadii muddo aan sanad dhameyn. Laakiin waxa jira su’aalo aynaan is weydiin badankeen. Mas’uul kasta waxa horumarin kara dibna u dhigi kara la taliyihiisa marka su’aasheydu waxa weeye “Kuma ayuu ahaa la taliyihiisii gaarka ahaa ee xilligaas?” “haddiise ay koox badan ahaayeen hadda ma joogaan ama ma la heli karaa?”
Inkastoo xilka Md. Farmaajo ee haatan uu ka duwanyahay kuwii uu hore u soo qabtay haddana waxan aaminsanahay in uu madaxweynuhu u baahanyahay rag ula taliya sida kuwii hore, markuu reysul-wasaaraha ahaa ay u siin jireen soo jeedinnadii uu ku tanaaday dalkuna ku tisqaaday. Haddiise jagadaas loo dhiibo qof aan bisleyn, aragti dheereyn oo aan la socon hannaanka siyaasadda magoogan waxay ila tahay in uusan heli doonin garbo uu ku duulo.
Madaxweynaha Soomaaliya, La taliye kaliya uma baahna ee waxay u baahantahay la taliyeyaal ka samata bixiya marxaladaha adag ee ka soo food saara gudaha dalka iyo dibadda. Walow madaxweyne kasta uu ka caqabado duwanyahay kan ka horreeya ama ka dambeeya, haddane waxa lagama maarmaan ah in la helo hoggaan dhan kasta ka feejigan, fiiro dheer misana danta guud abbaara.
Madaxweynihii isaga ka horreeyey Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, intii uu xilka hayey wuxu soo magacaabay raysul wasaarayaal 4 (afar) gaaraya arrintaas oo la oran karo waxa sabab u ahaa go’aamo markii horeba laga fiirsan lana rog-rogin. Had iyo jeer, in uu raysulwasaare la jaan-qaadi kara qorshihiisa siyaasadeed soo magacaabo waxay ku xerantahay wada tashiyada uu la yeesho xubnaha mudan in lala wadaago go’aamadaas. Masuulka uu soo xulan doonana waa kan labaad ee sare u qaadi kara sumcadda xukuumadda iyo kalsoonida ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed.
Magacaabista raysulwasaare noqda tusaale lagu dayan karo waxay gaashaan u noqon kartaa musuq-maasuqa lagu eedeeyo in ay ku kacaan golaha wasiirrada. Halka sida weyn isha loogu hayaana waxa weeye wasaaradaha kala ah maaliyadda, waxbarashada, garsoorka, amniga iyo arrimaha dibadda. Haddii mid kamid ah uu tuhun soo galo, wuxu wasiirka koowaad awood u leeyahay in uu u gudbiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka si xilka looga qaado masuuliyiinta lagu arko khiyaano-qaran.
Fekerka iyo aragtida lagama wada sinna. Uurka iyo maanka dadka waxa ka gubaya ama ku jiraahi isku si ma wada aha. Inta aan ka soo warramay iyo in kaloo badan oo maskaxdeyda ka guuxeysa balse aanan u haynin xogo dheeri ah oo aan ku faahfaahiyo waa sababaha igu kallifay inan qoraalkan la wadaago dadkeyga iyo inta ku hadasha ama garaneysa Af-Soomaaliga. Laakiin siyaasaddu waa haadaan iyo buuro’e Farmaajo Farxad ka Filo”
W/D:- Yuusuf Maxamed Axmed Sheelare